Afartankii sano ee dagaalkii Iran iyo Ciraaq, Tehran waxa ay cadaawadii labada wadan u bedeshay saameyn xooggan oo dhankastaa, iyadoo iska dhex aragtay howlalka waawaayn ee Baqdaad isla markaana noqotay saaxiibka ugu sareeya ganacsiga.
Waa marxalado isdaba joog ah Aziz Jaber, oo ah borofasoor cilmiga siyaasada ka dhiga jaamacada Baqdaad ee Mustansariyah University kana badbaaday isku dhaca, weligiis kuma fikirin suurtagalnimada arintaan sida uu u sheegay AFP.
“Way adkaan lahayd in la qiyaaso waqtigaas in tani ay dhici doonto – in dhinacyada ku xiran Iran ay hadda hanan doonaan xilalka Ciraaq,” Jaber ayaa u sheegay AFP.
Hoggaamiyihii Ciraaq Saddam Hussein ayaa ku duulay Iran bishii Sebtember 22, 1980, isagoo ka baqaya hanjabaad uga timaadda xukunkiisa haddii hoggaamiyeyaasha wadaaddada cusub ee Shiicadu isku dayaan in ay ku soo bandhigaan kacaankoodii Islaamiga ahaa ee 1979 ee dalka ay deriska yihiin ee Ciraaq.
Intii uu dagaalka socday oo dhan, Iran waxa ay u fidisay gabbaad nabdoon kooxo kala duwan oo ka soo horjeeda Saddam, laga soo bilaabo tirooyinka Kurdiyiinta ilaa Golaha Sare ee Kacaanka Islaamiga ah ee Ciraaq iyo garabkeeda militariga, Badar Corps – oo labaduba lagu aasaasay Iran 1982.
Waxa ay kobcisay xiriiradaas ilaa duulaankii uu Mareykanku hogaaminayay ee Ciraaq 2003 – taasoo la micno ah in ay xiriir dhow, mid ka fac weyn Washington la yeelatay kuwii ka dambeeyay weerarkii Saddam.
17-kii sano ee laga soo bilaabo, weerarkii Ciraaq xoogga Shiicada ayaa la wareegay hogaanka sare ee Ciraaq.
Lix ka mid ah raiisul wasaarayaashii Ciraaq kadib duulaanka, seddex kamid ah waxay inbadan 1980 waxbarashooda kuqaateen magaalada Tehran, oo ay kamid yihiin Ibrahim al-Jaafari, Nuuri al-Maliki iyo Adel Abdel Mahdi, oo iscasilay sanadkii hore.
Saraakiisha Badr Corps wali waxa ay hayaan jagooyinka ugu sareeya ciidamada amniga. Masrour iyo Nechirvan Barzani, oo qoysaskoodu ay magangalyo u raadsadeen dalka Iiraan iyaga oo ka cararay Saaddam, ayaa hadda kala ah raiisul wasaaraha iyo madaxweynaha gobolka Kurdiyiinta ee Ciraaq.
“Iiraan waxay leedahay siyaasiyiin dhagar qabayaal,” Jaber ayaa yiri.
– Sambabka dhaqaalaha ee Tehran
Iiraan, sidoo kale, dagaalku wali waxa uu u yahay astaan ​​xoog leh:
Dhakhaatiirta caafimaadka ee la dagaallamaysa cudurka cusub ee loo yaqaan ‘coronavirus’ sannadkan Iran waxa ay ugu yeertay “shahiidiin” naftooda ku waayey la dagaallanka xoogaggii Saddam Xusseen.
Bandhigga sanadlaha ah ee lagu sharfo dhibbanayaasha dagaalka waxaa inta badan loo adeegsadaa in lagu soo bandhigo hub cusub oo ay ku jiraan gantaallada ballistic-ga, halka halyeeyaduna ay hadda fadhiyaan fariisimaha ugu sarreeya ee militariga Tehran.
Xiriirku waxa uu aad uga fogyahay siyaasada.
In kasta oo uusan jirin ganacsi laba geesood ah oo u dhexeeya Iran iyo Ciraaq, hadana badeecadaha Iiraan waxa ay si sharci-darro ah lagu geliyaa Ciraaq iyada oo la marsiinayo xadka dhererkiisu yahay 1,600-kilomitir (995-mayl) .
Kala bixida Saddam ka dib, ganacsiga caadiga ah waa la bilaabi karaa, ayuu yidhi Esfandyar Batmanghelidj oo ka tirsan Bourse & Bazaar, oo ah mareegaha wararka iyo falanqaynta ee taageera diblomaasiyadda ganacsiga ee Iran.
“Waa nidaamka caadiga ah ee arrimaha labada dal ee xadka isku leh in ay ka ganacsadaan. Waxaad dood la mid ah ka sameyn kartaa dalalka Poland iyo Jarmalka wixii ka dambeeyay argagaxii dagaalkii labaad ee adduunka,” ayuu u sheegay AFP.
Markii Ciraaq ay dooneysay in ay dib u dhisto ka dib duulaankii uu Mareykanku horkacayay, qalabka dhismaha ee raqiiska ah ee Iiraan ayaa ahaa xulasho ugu badan. Ganacsigaas wuxuu ku fiday inuu ka mid noqdo cuntada, gawaarida, daawada ilaa iyo hadda, xitaa korontada laga soo dejiyo.
Laga soo bilaabo khudaar ilaa xanuun baabi’ye, alaabada Iiraan waxaa lagu iibiyaa Ciraaq oo dhan, iyada oo ka qiimo jaban wax soo saarka gudaha.
Ciraaq ayaa ah meesha ugu sareysa ee alaabada aan-hydrocarbon ee Iran, ay ku kacayso $ 9 bilyan inta udhaxeysa Maarso 2019 iyo Maarso 2020, sida laga soo xigtay rugta ganacsiga Iran.
Bishii Luulyo, Hogaamiye Iran Hassan Rouhani wuxuu wacad ku maray inuu laba jibaari doono tiradaas.
Iyada oo dhaqaalaha Iiraan uu sii kordhayo culeyska cunaqabateynta Mareykanka tan iyo 2018, Tehran waxay ku tiirsan tahay Ciraaq si aad iyo aad u badan oo ah sanbabkeeda dhaqaale.
“Shirkadaha Iran waxay raadinayaan meel ay ka buuxaan macaamiisha, maadaama aadan kor u qaadi karin iibkaaga Iiraan hadda maxaa yeelay arrimihu waa adag yihiin,” ayuu yiri Batmanghelidj.
– ‘Waxaa loo gacan galiyay Iiraan’ –
Fuuq-baxa Iran ee siyaasadda iyo dhaqaalaha ayaa bilaabay inuu ciribtiro reer Ciraaq.
Mohammad Abdulamir, oo ah Sarkaal 56 jir ah oo dagaalka kahadlaya ayaa yiri “ciraaqiyiinta dawlada maanta u ogolaaday Iran in ay soo galaan. Waxay ku wareejiyeen wadankeena – dhaqaalahiisa, beeraha iyo amaanka.”
“Waxaan dagaallamayay muddo shan sano ah, waxaan maxbuus dagaal ugu ahaa Iiraan 10-kale – ugu dambeyntiina dalkaygii waxaa lagu wareejiyay Iran,” ayuu u sheegay AFP.
Jahwareerkiisa waxaa dareemaya dad badan oo kale waxayna gaareen madaxa bishii Oktoobar ee sanadkii hore, markii mudaaharaadyo aan horay loo arag ay ka bilowdeen caasimada Ciraaq iyo koofurta taasoo looga soo horjeedo Maamul xukumadda oo loo arko musuqmaasuq, hoos u dhac dhaqaale iyo in maamulkii la hoos geeyay Tehran.
Bilo kadib, duqeyn diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Mareykanka ay ka geysteen Baqdaad waxaa lagu dilay Jeneraalkii ugu sareeyay Iran Qasem Soleimani iyo taliye sare oo ka tirsan militariga Ciraaq Abu Mahdi al-Muhandis.
Soleimani wuxuu shaqadiisa milatari ka bilaabay dagaalkii Iraan iyo Ciraaq, isagoo ka soo dhex baxay safka si uu u noqdo bartilmaameedka Tehran ee Ciraaq. Muhandis wuxuu u adeegay isla dhinaca Iran, oo waxa uu qayb ka ahaa saldhiga Badar.
Maqnaanshahooda ayaa hoos u dhigay ishii ugu muhiimsan ee Iran ee saameynta Ciraaq. Kadib, bishii Maajo, Ciraaq waxa ay heshay horyaal cusub.
Mustafa al-Kadhemi iyo la taliyayaashiisa ayaa loo arkaa in ay ka liitaan dhanka iiraaniyiinta marka labarbardhigo kuwii ka horreeyay.
Laakiin Tehran ma ahan mid argagax leh, ayuu yiri falanqeeye ka tirsan machadka Chatham House London UK, oo lagu magacaabo Renad Mansour, maadaama Iran shabakado kaladuwan ay abuurtay horaantii dagaalka si ay u qabsato qaab-dhismeedka Maamulka Ciraaq.
“Iiraan waxay xulafo ku yeelatay shabakado siyaasadeed oo rasmi ah laakiin sidoo kale kuwa aan rasmiga ahayn – oo ay ka mid yihiin maleeshiyooyinka, ganacsiyada, iyo wixii la mid ah – si loo hubiyo in Ciraaq maanta ay tahay mid hoos tagta Tehraan, oo Tehran taqaan,” ayuu Mansour u sheegay AFP.
Iyada oo saameyn yar ku yeelatay xafiiska RW, Tehran waxa ay u weecatay xulafada baarlamaanka Ciraaq iyo wasaaradaha.
Hadaba Iiraan waxa aad weydiisaa: “Xagee ka dooneynaa Ciraaq 50 sano kadib?”